Isticmaal Qodobbada Calaamadda Akhriska ee emails
Web & Raadi
Webka ugu fiican
Badbaadada & Asturnaanta
Email & Fariin
Talooyin & Qalabyo
Miisaaniyadaha Outlook & Tricks
Talooyinka Gmail & Tricks
Talooyinka Yahoo & Tricks
Tilmaamaha & Tababarada
Fikradaha Muhiimka ah
Fariin qalad ah
Darawaliinta & Dhismaha
Ku rakibida & Dib-u-hagaajinta
Hawlaha & Dhaqaalaha
TVyada & Tiyaatarka Guriga
Garoomada & Gawaarida
Ciyaaraha & Ciyaaraha
Email & Fariin Tilmaamaha & Tababarada
Isticmaalida dhibcooyinka xaanshiyaha waxay u sahli karaan emaylkaaga inay akhriyaan ayna hubiyaan qodobbada muhiimka ah ee la ogaanayo. Baro sida aad ugu dhex gali karto emailkaaga.
Maxaa ka dhigaya qoraalka si sahlan loo akhriyo?
"Dib u dhigida, aqoonsiga qaabka, xoojinta akhrinta, sii-haynta, aqoonta, kooxaynta muuqaalka, jawaab-celinta sheeko": uma baahnid inaad mid soo qaadato, ama laba ... ama shan ... dhammaantood waxay ku adkeeyeen inay sheegaan sababta qoraalka loo qoray hal font ka fiican akhrinta qoraalka oo ka kooban mid kale.
Tani, ugu yaraan, waxay ahayd gabagabadii George E. Mack ee "Warfaafinta farshaxanka" laga soo bilaabo 1979-kii. Sahan lagu sameeyey 101 sano oo cilmi-baaris ah, 1999-kii, Ole Lund waxay soo gashay gabagabada soo socota markii uu ka fikiray in feylasha faylasha ama kuwa yar Dhibaatooyinka Roomaanka (dabcan!) Waxay ahaayeen kuwo si fudud loo akhrisan karo: yaa garanaya?
Qoraalku wuu sahlan yahay in la akhriyo marka si fiican loo qoro, laga yaabo in xitaa haddii ay xarfaha leeyihiin dhowr curl yar ama tiro badan.
Maxay Wax Dhac ah ka dhigaysaa qoraalka aan la aqrin?
Haddii uu mid u qoro dadka akhrinaya shaashadda oo dhan, waxay inoo sheegaan, mid waa in la ixtiraamo dadka ay u jeedaan oo kaliya inay eegaan qoraalka oo ka boodaan qaybo badan - oo u qor.
Indhahaas si aad wax ugu turunturo, oo waxay u maleynayaan, inay ku turunturanyihiin erayo yar ama jilicsan ka dib markii xayawaanka ceejiya. Qoraalyada gaaban (qoraalka gaaban) ee la gooyey (yaryar) oo ku jira shaqada hore ee weyn taas.
Meelaha Calaamadda: Faa'iidooyinka Sharciga ee loogu talagalay Emails iyo Akhristayaasha
Sidaa daraadeed, xaanshiyaha dhibcaha iyo liiska laga yaabo inay liis garoobaan ayaa u sahlaya akhristayaasha
ka bood badi qoraalka emailka iyo
weli waxay helayaan xabbado muhiim ah ugu yaraan.
Wax kasta ha ku soo celin kartid liiska dhibcaha rasmiga ah, dabcan, laakiin waa inaad isku daydaa inaad isticmaasho farriimaha emailkaaga mar kasta oo ay macno samaynayso.
Dhibcooyinka dhibcaha iyo liistada lambarka ah ma aha oo kaliya inay sahlanaato in ay akhriso email ahaan iyagoo abuuraya
iyaguna way awoodi karaan
waxay u sahlaysaa dadka qaata inay ka jawaabaan qaab habaysan oo degdeg ah.
Jawaabaha iyo faallooyinka waxaa la siin karaa qodobo gaar ah, iyo haddii fariinta asalka ah ee si haboon loo qaabeeyey, jawaabta waxay u baahan tahay in qaabkoodu yar yahay.
Sidee loo galiyaa dhibcaha xadhiga ee HTML Email
Si aad u sameyso liiska xabadka haddii barnaamijkaaga emailka ama adeeggaaga kuu ogolaanayo inaad soo dirto farriimaha qaabaynta HTML , inta badan sida caadiga ah:
Xaqiiji in fariinta aad qoreyso ay ku haboon tahay in la isticmaalo qaabeynta.
Riix badhanka rikoodhka la geliyay ee ku yaal liiska qaybta qoraalka.
Si aad ugu darto dhibic cusub:
Hit Gali .
Si loo dhammeeyo liiska:
Hit Gali laba jeer.
Si aad u sameyso liis hoosaad:
Hit Tab .
Sidee loo galiyaa dhibcaha xadhiga ee E-mail Text
Si aad u sameyso liis ciqaab leh adoo adeegsanaya qoraal toos ah email ahaan:
Ku bilow liistada cutubka keligiis, isaga oo ka soocaya cutubka ka hor intaan la helin khadad faaruq ah.
Isticmaal "*" (dabeecad xiddig leh dabeecad maskaxeed ka hor iyo ka dib) si aad u muujiso dhib cusub.
Ku billow hal dhibic kasta oo khadka u gaar ah.
Waxaad isticmaali kartaa jilayaal sida ✓✷✴☞ • ◦; maskaxda ku hay in kombiyuutarka qaataha laga yaabo inaanu si sax ah u muujin.
Haddii aad rabto, waxaad xadeyn kartaa ballanka dhibic kasta iyo xariiqyada xiga. U hubso in ballanta aysan ka badnayn 80 xaraf haddii aad sidaa yeelatid.
Maqaalka Qoraalka Lagu Qorey Tusaale
* Kani waa sheyga firxadka.
* Sheyga labaad waa waqti dheer. Haddii aad qabato
doortaan in ay gacanta ku dhejiyaan khadadka, hubso mid kasta
xariiqu kama badna 80 karoon.
* Waxaad awoodi kartaa, laakiin uma baahnid inaad iska xejisid.
Sida Loo Helo Macaamiisha Dukumentiga ee AIM adoo adeegsanaya POP ama IMAP
5 Adeegyada Nabadgelyada ee Safka ugu Fiican ee 2018
Sida Loo Faafiyo Farriin AOL Mail
Sida loo Isticmaalayo "Jawaab" iyo "Dhamaan Dhammaan" ee MSN Explorer
Sida loo Siiyo Windows Live Messenger
Tag sanduuqaaga Si dhakhso ah MSN Explorer
Sida loo abuuro Koonto ProtonMail Free Free
Sida loo qaabeeyo Aim Mail ah oo xawilaya (SMTP) ee Macaamiisha Email kasta
Sida loola wadaago qof la jooga AIM Mail
Waa maxay faylka aruurinta?
Isticmaalka HTML5 Shiv si uu u Hirgaliyo HTML 5 ee Old Versions ee Internet Explorer
Isticmaalidda iftiinka luuqadaha Boolean iyo Metadata
Gateway One ZX6971-UR31P 23-inch All-In-One Desktop PC
12 Aad u Fiican Twitter Lambarka Aqoonsiga
Sida Loo Usoo Dhawaaqo Kaliya Muujinta kaliya ee Muuqaalka Express
Sida Loo Helo Your Deviance Android Device
Sida loo abuuro sawirro xayeysiin ah Dreamweaver
Waa maxay Dhibaatada Hard Disk Drive?
Waraaqaha Waayeelka IV: Qariiradaha Oblivion
Dhaqdhaqaaqa codka ee Nidaamka Automation Systems
Maxaa kugu dhacaya Profile-ka Facebook marka aad dhimanayso?
Sidee loo soo celiyaa iPod Touch
Qeybta 8-aad ee Dib-u-eegida Subwoofer-ka ee gudaha
Dib u eegista alaabta
Isku day Hoosyadan Hore ee Hoos u Dhaca Muuqaalka Mashruuca Nidaamka
Ciyaartoyda X-COM ee ugu fiican
Sida loo Isticmaalo Khariidadaha Miisaaniyada Hotmail ee Hotmail
9ka Shirkadood ee ugu Fiican ee UV ee loogu talagalay Android
Sida Loo Isticmaalayo Isticmaalka Xogta ee ku yaal Aaladda Android
Sida loo soo celiyo Hal.dll Laga bilaabo Windows XP CD
© 2020 so.eyewated.com